Hatao amin’ny fari-piadidiam-pahasalamana 67: andiany fahatelo ny vaksiny miaro amin’ny kitrotro | NewsMada
Hatao amin’ny fari-piadidiam-pahasalamana 67: andiany fahatelo ny vaksiny miaro amin’ny kitrotro
Mitranga any Eoropa, sy any Amerika ny aretina kitrotro amin’izao fotoana izao fa tsy eto Madagasikara intsony ary sokajiana ho pandémie fa tsy épidémie intsony satria kaontinanta telo no voakasika, hoy ny minisitry ny Fahasalamana, profesora Rakotonirina Julio, omaly.
Ho an’ny eto amintsika manokana, efa nihena ny isan’ny zaza niditra hopitaly noho ny aretina kitrotro. Efitra herinandro lasa, nahatratra 2 000 ny zaza notsaboina tao amin’ny hopitaly, ny herinandron’ny 4 marsa, nidina ho 600 ireo noraisina an-tanana tao amin’ny hopitaly. Nahitam-bokatra ny fanaovam-baksiny indroa miantoana, ny janoary sy febroary lasa teo. Hiditra amin’ny andiany fahatelo ny 25 marsa- 5 avrily ho avy izao amin’ny fari-piadidiam-pahasalamana 67 ho an’ny faritra 19. Ho an’ny faritra Analamanga, voakasika ny distrikan’Anjozorobe sy Ankazobe, any amin’ny faritra Boeny, hisitraka vaksiny ny ao Mahajanga II sy Mitsinjo ary Soalala.
Ho an’ny zaza 4 tapitrisa, enim-bolana ka hatramin’ny 9 taona, ny vaksiny ho fanamafisana ny hery fiarovana efa ananany. Tokony hanao avokoa ireo efa vita vaksiny na tsia ary tanjona ny hahatrarana ny taha 95%. Tsara ny vokatra ho an’ny andiany faharoa, 102,4% ny taha, 1 184 450 ireo ankizy vita vaksiny. Ho an’ny vaksiny 11 fanao mialoha ny faha herintaon’ny zaza kosa, nanomboka ny volana janoary lasa teo, nihoatra ny 80% amin’ny zaza niantefan’ny hetsika avokoa ny tahan’ny fahavitana vaksiny teny amin’ny CSB.
Misy tolo-kevitra roa
Amin’izao fotoana izao, misy tolo-kevitra avy amin’ny tomponandraikitry ny minisitera amin’ny tokony hanaovana ny famerenana vaksiny faobe iadiana amin’ny kitrotro, ny taona 2020. Eo am-pikarakarana ny fanatanterahana ny fanaovam-baksiny ho an’ny taona 2020 ny teknisianina, hoy ny talen’ny fanaovam-baksiny ao amin’ny minisiteran’ny Fahasalamana, Ramamonjisoa Bodo.
Tolo-kevitra faharoa, atolotra ny mpitondra ny hametrahana lalàna hanentanana ny ray aman-dreny hampanao vaksiny ny zanany iarovana amin’ny areti-mifindra, tahaka ny kitrotro.
Nanomboka ny 3 septambra 2018 ka hatramin’ny 4 marsa lasa teo, 98 415 ny isan’ny trangana kitrotro, 630 ny maty ary 511 ny fahafatesana teny anivon’ny fokontany.